Nanangana ny Maty Tokoa ve i Jesosy? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mooré Nahuatl (Afovoany) Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Twi Umbundu Uruund Vietnamianina Wallis Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zandé Zoloa Éwé
Nanangana ny maty tokoa ve i Jesosy?
Natsangan’i Jesosy i Lazarosy, na dia efa maty efatra andro aza
Milaza mazava tsara ny Baiboly fa nanangana olona tamin’ny maty i Jesosy. Tsy angano izany satria tena nisy ny toerana nitrangany, ary voalaza mazava tsara ny fotoana nisehoany. Nisy vahoaka niaraka tamin’i Jesosy, ohatra, teo antenatenan’ny taona 31. Avy tany Kapernaomy izy ireo ary ho any Naina. Nifanena tamin’ny mpandevina maromaro izy ireo rehefa ho tonga tany, ary natsangan’i Jesosy ilay olona maty. Tena nitranga izany satria voasoratra ao amin’ny Tenin’Andriamanitra, sady hitan’ny olona be dia be.—Vakio ny Lioka 7:11-15.
Natsangan’i Jesosy koa i Lazarosy namany, na dia efa maty efatra andro aza. Tena azo antoka izany satria be dia be koa ny vavolombelona nahita an’ilay izy.—Vakio ny Jaona 11:39-45.
Nahoana i Jesosy no nanangana ny maty?
Nanangana ny maty i Jesosy satria tena nalahelo ny olona izy. Tiany haseho koa hoe nanome azy fahefana hanao izany ny Rainy, izay Mpanome aina.—Vakio ny Jaona 5:21, 28, 29.
Nampanantena i Jesosy fa mbola hanangana ny maty, amin’ny hoavy, ary azontsika antoka izany satria efa nanao izany izy taloha. Hanangana olona maro be izy, anisan’izany ny olona tsy marina, izany hoe izay tsy nahalala mihitsy an’i Jehovah, ilay tena Andriamanitra. Havela hianatra momba an’i Jehovah sy hampiseho hoe tia azy izy ireo.—Vakio ny Asan’ny Apostoly 24:15.
Inona no Atao hoe Fitsanganana Amin’ny Maty?
Mety ho gaga ianao rehefa mahalala hoe iza avy no hatsangana amin’ny maty.
Tena Hatsangana ny Maty!
Efa nisy havanao maty ve? Mbola hahita azy ireny ve ianao? Jereo ato izay lazain’ny Baiboly momba ny fitsanganan’ny maty.
Novambra 2014 | Tena Misy ve i Satana?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Novambra 2014 | Tena Misy ve i Satana?